आशा र त्रासमा स्ववियु निर्वाचन « Postpati – News For All
देशभर थप १७ सय ३ जनामा कारोना संक्रमण पुष्टि
दिपेन सिम्खडा पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
आस्थाको धरोहर आखै अघि ढलेको हेर्न कहाँ पो सकिन्छ र । घाम छाया जस्तै लुकामारी चल्दै गरेको नेपाली राजनितीले पुर्णिामाको रातमा मात्रै हैन, औँसिको रातमा पनि आकाशको तारा नियाल्दै छ ।
कुरो बुजि हाल्नु भो यतिखेर नेपाली युवा तथा विद्यार्थी राजनीतिमा गरागरम बहस चलिरहेको छ, स्ववियु निर्वाचनको ।
लामो समय देखी अस्तब्यस्त रहेको नेपालको स्ववियु निर्वाचन पटकपटक हल्ला र प्रचार मै सिमित छ । यस पटक पनि हल्लामै सिमित होला कि भन्ने कतिपय विद्यार्थी नेताहरुको चासो र गुनासोको बिसय मात्रै बनेको छैन, कि आशा र त्राश पनि पैदा गराएको छ । केही सिमित मात्रामा भनेपनी स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पसहरुमा नयाँ मुहारहरु भने देख्न थालेको छ ।
बर्षौ सम्म गुपचुप लुकेर बस्ने र स्ववियु निर्वाचनको हल्ला चल्ने बित्तिकै क्याम्पस छिर्नेहरुले चुनाव जित्लान हार्लान वा जितिहाले पनि विद्यार्थीको समस्य हल गर्न सक्लान या नसक्लान ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर बर्षौ पछि क्याम्पस छिरेका ती नयाँ अनुहारलाई विद्यार्थीले पत्याउने आधार भने देखिदैन।
यस्तै स्ववियुका एउटा दाबेदार हुन काठमाडौ नेपालटार स्थित एन.आर कलेजका विद्यार्थी नेता लक्ष्युमण बस्नेत । नुवाकोटका विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता रहेको यस क्याम्पसमा काठमाडौ तार्केश्वर-७ का स्थाई बासिन्दा बस्नेतले भने विद्यार्थीको मन जित्न सफल भएका छन् ।
अनेरास्ववियुको तर्फबाट उमेदवारको दाबेदार रहेका बस्नेतको बारे नुवाकोटकै प्रतिपक्षी विद्यार्थीहरु पनि सकारात्मक छन । उनीहरु भन्छन ‘अन्य विद्यार्थी नेताहरु भ्रष्टाचारि र गुण्डाहरुको चङ्गुलमा फस्दा बस्नेत श्रमिक जनता र विद्यार्थी बर्गको आवाज (समस्य) लिएर प्रसासनको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन्, सिङ्गो संगठन सत्ता र सरकारको स्तुतिगान गाउने,भजन मण्डलि बन्दा पनि उहाँ एक्लै लड्नु भएको छ, यस्को कदर पक्कै पनि विद्यार्थीले गर्ने छन् । सायद संगठनले बस्नेतलाई उम्मेद्बारी बनाएको खण्डमा उनको जित सुनिश्चित नै छ ।’
यता बस्नेतले पनि आफ्नो भद्र भनाइ राखेका छन् । उनि भन्छन, बस्नेतले विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा स्थापित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन लागेको छ । यो सकारात्मक बिषय हो । स्ववियु आन्दोलनको बलिदानी पुर्ण गौरब हो । अग्रजहरुको बलिदानको सान हो । विद्यार्थी आन्दोलनको जुझारु मोर्चाको पहिचान हो । तर आज विद्यार्थी आन्दोलनको सामु स्ववियुको महत्त्व अर्थ र औचित्यको सन्दर्भमा व्यापक बहसहरु भैरहेको छन् । हिजो राज्य ब्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने मोर्चाको रुपमा स्थापित स्ववियु आज भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दिको अड्डा नबनेको भने होईन । श्रमिक जनता र विद्यार्थी बर्गको आवाज बोल्ने स्ववियु आज केही ब्यक्ति आसेपासेहरुको मण्डली जस्तो बनेको छ । यी मुद्दाहरुमा स्ववियुको सन्द्रभमा हामी बहस र छलफलमा छौँ । विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियुको प्रतिपक्षीय चरीत्रको रक्षा गर्दै खबरदारी मिर्चाको ऎतिहासिक बिरासत जोगाउने यो कार्यभार आफ्नो सामु आएको हुँदा मेरो उम्मेद्बारी पक्कै आउछ । मेरो क्षमता र संघर्षको मुल्यांकन माथिलो कमिटीले पनि गर्छ भन्ने मा म बिस्वस्त छु ।
उनले थप्छन, आसा र त्रास बिच हुनलागेको स्ववियु निर्वाचनमा बस्नेतको मुल्यक माथीलो कमिटीले गर्ला नगर्ला त्यो त छुट्टै बहस बिषय हुनेनै छ तर नेपालटारमा चर्चामा रहेका बस्नेत अस्ताउलान कि उदाउलान त्यो भने स्ववियु निर्वाचन पश्चात नै थाहा हुने छ ।
(लेखक दिपेन सिम्खडा क्रान्तिकारी लेखक संघमा आबद्ध छन्)
प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई यस्तो सन्देश
सशस्त्र प्रहरीका ८ डीआईजीको सरुवा, को कहाँ ? हेर्नुस
न्यौपानेलाई थप एक हप्ता हिरासतमा राख्न अनुमति